Maalmahan, raadinta maaddooyinka caafimaadka ugu badani waxay ka badan yihiin kor u kaca tan ka hor. Marka ay timaado helitaanka qaabka jireed ee ugu fiican iyo ilaalinta caafimaadka jirkaaga, xididka Maca waa nafta dhabta ah. Xidigga Maca waa dhirta dabiiciga ah ee la yaqaan, oo laga goosto Andes. Xildhibaan Maxamed Cumar Xabeeb [...]
Ciyaaraha iyo nashaadaadka jimicsiga ayaa kaa dhigaya kuwo kugu habboon oo diyaar kuu ah, si aad u joogteysid xajmiga, waxaad u baahan tahay diyaarinta fasalka koowaad! Haddii ay tahay socod barasho, tababar maxkamadeed, tabarbar dulqaadasho ama haddii kale, helitaanka waxyaabaha ku habboon fadhigaaga ayaa runtii gacan ka geysan kara saameyn weyn! Nasiib wanaag, barta WoopShop, waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad dhex marto barnaamijyo […]
Qurxinta maahan had iyo jeer inay noqoto mid daal leh iyo waqti qaadasho, sax? Xaqiiqdii, haddii aad ka fekereyso inaad gurigaaga siiso dardar yar, ma aha inaad fiiriso meelo kale! WoopShop, waxaad ka heli doontaa xulasho aad u fiican oo ah alaabooyin qurux badan, wax ku ool ah oo qiimo jaban sida qalabka derbiyada, qalabka jikada, iyo alaabada qurxinta guriga, [...]
Iyada oo ilaha daba yimaada, sidaas daraadeed isbedel cusub iyo baahida loo qabo qalab cusub, muuqaal khaas ah. Aan dareenno daacadnimo leh, qalabka waxtarka leh marwalba way fiicantahay in la helo, waxayna noloshaada ka dhigaan mid aad u fudud. Marka ay timaado doorashada xulashada ugu fiican, waxaa jira arrimo kala duwan oo la tixgelinayo. Dabcan, waxqabadka, waxtarka, [...]
Laga yaabee inaysan u egtahay, laakiin isugeynta udub-dhexaadku waa wax lagu garaaco marka la eego raaxada, waxqabadka iyo qaabka! Iyadoo aan loo eegin xilligan xaadirka ah, qaar ka mid ah lacagaha wax lagu dhejiyo ayaa ku xiran in ay sameeyaan aragti ah sanadka oo dhan. Maxay tahay rafcaan ku saabsan isku-habaynta isu-geynta, markasta? Oh, waxyaabo badan! Kulankan oo ahaa kii ugu [...]
Ka fikirida waxa ilmaha iyo ilmaha yaryar oo dhan ku saabsan yihiin? Waa hagaag, maxaa kale haddii aan la taaban karin, raaxada, iyo shakhsiyadeed ?! Inta lagu jiro bilaha qaboobaha sanadka, waalidiin badan ayaa ku adkaa helista dharka ilmaha iyo caruurta oo buuxiya shuruudaha kor ku xusan oo weli keenaya heer jahwareer leh. Hase yeeshee, ka [...]
6 Sheyga Shakhsi ahaaneed ee Shakhsi ahaaneed ee loogu talagalay Xilligan Fasaxan!
Miyuu yahay xilli-ciyaareedka iyo moodada sida weligiis ah! Haddii aadan weli haysan wax hadiyad ah oo dhan ragga wanaagsan ee noloshaada, hadda waa fursad aad sidaa u yeelato! Jiilaalkan, waa wax walba oo ku saabsan style, raaxo iyo wax qabad, iyo dabcan - taabasho shakhsi ah oo dhan oo dhan! [...]
Muujinta Jiilaal iyo Xagee Laga Helo! Iyadoo jiilaalka si fiican u socdo, hal shay ayaa weli la hubaa - markasta waxa ugu wanaagsan in lagu salaamo qaabka! Laga soo bilaabo munaasabadaha si wax loogu dhigo bloggers iyo saameynta warbaahinta bulshada, qof walba wuxuu tixgeliyaa xilliga qaboobaha mid ka mid ah xilliyada ugu macquulsan ee labbiska! Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen [...]